2 Duyuurad Helicopter ah oo deegaanka Baraxley ee Gaalgacyo ka dajisay Saraakiil Mareykan ah oo kormeeraya dagaallada gobollada Dhexe. | Halganka Online
2 Duyuurad Helicopter ah oo deegaanka Baraxley ee Gaalgacyo ka dajisay Saraakiil Mareykan ah oo kormeeraya dagaallada gobollada Dhexe.
Warar xog ogaal ah oo aan helnay ayaa xaqiijinaya in maalinimadii Sabtidii ay so gaareen deegaanka Baraxley ee magaalada Gaalkacyo saraakiil Ameerikaan ah oo la sheegayo in ay qeyb ka ahaayeen socdaalka General Galaal uu hogaaminayo ee ku aadan kormeerka dagaalka Qubuura Galeenka ay ka wadaan Gobollada Dhexe.
2 diyaaradood oo Helicopters ah ayaa la sheegay inay kusoo dagteen halkaasi iyadoona xubno Mareykan ah oo sirdoon ah ay la socdeen kuwaas oo la sheegayo in ay warbixino ka qaadanayaan xubno kale oo General Galaal horkacayo kuwaasi oo hadda ku sugan gudaha gobolka Galgaduud.
Ujeedka ugu weyn ee ay leeyihiin saraakiishaasi ayaa la sheegay in uu yahay qaabkii si xoogan loogu gacan siin lahaa maleeshiyada Qubuura Galeenka dagaalka ay kaga horjeedaan xoogaga Islaamiga ah iyo in la dhameeyo madmadow muddooyinki u danbeeyay soo kala dhexgalay iyaga iyo odayaasha beelaha oo dagaalladasi dhibaato badan ay usoo jiideen.
Wararka qaar ayaa sheegaya in lacago iyo hub kooban lasoo gaarsiiyay Qubuura Galeenka halka odayaal dhaqameed ku sugan degmada Guriceel shirar uu la qaatay General Galaal si uu ugu qanciyo sii wadista dagaalka, waxaana jira warar aa la hubin oo sheegaya odayaasha xittaa lacago in lagu qufay.
Maleeshiyada Qubuura Galeenka ayaa dhibaato weyn kasoo gaaray dagaalki bishii hore ay Mujaahidinta Al-Shabaab ku galeen degmada Dhuusamareeb, taasi ii reebtay khilaafaad daakhili ah oo sii xoogeystay kadib marki ay kusoo jabeen dagaalkii Warxoolo ee bartamihii Bishii Hore ee Janaayo.
« Ilo wareedyo: DKMG ah taag uma heyso dagaal adag, waxaana dillooday dhaqaalo la’aan iyo maamul xumo. Saraakiil Tigree ah oo odayaasha iyo dadka deegaanka Aabaaley oo u dhaw deegaanka Feerfeer u jeediyay hanjabaad ku saabsan Shabaabul Mujaahidiin. »